NDINE makore 49 ndinodawo murume ane makore 50 | Kwayedza
NDINE makore 49 ndinodawo murume ane makore 50
26 Sep, 2014 - 09:09	 2014-09-25T10:39:18+00:00 2014-09-26T09:00:20+00:00 0 Views
NDINE makore 49 ndinodawo murume ane makore 50 – 55 ari HIV negative. Nhare dzangu 0734 173 876.
Ndiri mukomana ane makore 25 ndinotsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 21 ari pachokwadi chokuda kuroorwa neni uye akanaka seniwo. Ane tsika ngaandibate pa0782 290 998 macall me back kwete.
Ndiri murume ane makore 34 okuberekwa ndinotsvagawo mukadzi akazvipira kuvaka musha, anotya Mwari uye achifarira zvokutengesa. Nhamba dzangu 0778 543 949.
Makadii zvenyu? Ndiri murume ane makore 30 ndinotsvagawo musikana kana mukadzi asina murume wekushamwaridzana naye. Ndinoshanda kuSouth Africa, nhamba dzangu +27 749 560 263.
Ndiri mukomana ane makore 24 ndinotsvaga musikana wekuroora ane makore ari pasi peangu. Ndiri mudzidzisi kwaRusape, nhamba dzangu 0783 812 626.
Ndiri mukomana ane makore 23 ndinodawo musikana ane makore 22 zvichidzika ane mwana 1 kana asina, anoda kuroorwa. Ndiri HIV-, ndifonerei kana kundibata paWhatsApp pa0772 567 691.
Ndiri mukomana ane makore 32 ndiri kudawo musikana wekuroora kubva pamakore 22 – 27 anogeza, vanoda zvekutamba kwete handidi. Handishande zvangu, sms kana kufona pa0776 824 566 asi vakadzi vevanhu kwete.
Ndiri mukomana ane makore 27 ekuberekwa ndinotsvagawo musikana ane makore 18 – 24 anoda kuti tironge ramangwana redu tozoroorana. Vanoda ndibatei kana kutumira sms pa0773 492 926.
Makadii veKwayedza? Ndiri musikana ane makore 17 ndiri kutsvagawo penpal ine makore 14-17. Ndibate pa0777 564 732.
Ini ndiri mukadzi ane makore 42 nevana 3 ndinotsvagawo murume ane makore 43 kusvika 50 anogona kutsvaga mari nokuti ini ndinoita basa remawoko. Parizvino handisati ndave kunwa mapiritsi, anenge andifarira nhamba dzangu 0777 385 595.
Ini ndiri mukomana ane makore 23 ndinotsvakawo musikana wekuroora anoda zveimba ari pakati pemakore 18 kusvika 20. Ndibatei pa0783 952 062, zvizhinji tozotaura.
Ndiri mukomana ane makore 20, HIV negative ndiri kutsvagawo musikana ane utano sehwangu asina mwana ane makore 18 – 20. Nhamba dzangu 0778 504 847 asi masms chete.
Ndiri mukomana ane makore 31 ndinoda musikana akanaka ane hunhu. Ndiri makanika, vanoda nhare dzangu 0733 066 581.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri mukomana ane makore 26 ndiri kutsvaga musikana ane makore 18 kusvika 25. Anondibata pa0782 404 427 kana paWhatsApp.
Ndiri murume ane makore 30 nemwana 1 ndinotsvagawo mukadzi anoda zvemusha. Vanondida ndibatei pa0782 401 323.
Ndiri murume ane makore 42 nevana vaviri, ndiri kutsvagawo mudzimai ari pachokwadi ane makore 25-38. Ndibatei pa0772 345 951.
Makaita basa veKwayedza, ndakazomuwana wandaida nekudaro vaifona pa0776 363 645 chiregai henyu.
Ndiri mukomana ane makore 23, HIV negative ndinotsvaka musikana ane makore 18 – 21 ari pachokwadi anotya Mwari uye anoshanda. Anenge andidawo ndibate pa0716 160 899.
Makadiiko? Ndiri musikana ane makore 18 ekuberekwa handina kumbobvira ndapinda mumba, ndinoenda kuchechi uye ndinotsvagawo mukomana ari pachokwadi ane makore 24 – 20 anoenda kuchechi. Handina chirwere saka ndinodawo asina chirwere, munondibata pa0783 255 562.
Ndiri murume ane makore 39 ndinotsvagawo mukadzi ane makore asingadarike 38 akavimbika, anoshanda uye ari HIV negative. Ngaandibate pa0773 677 023.
Ndiri mukomana ane makore 26 ndinodawo musikana ane mari yake anoda kupihwa rudo neni. Nhamba dzangu 0779 730 382.
Ndiri mukomana ane makore 32. Ndiri kutsvagawo musikana wekuroora ane makore 18 kusvika 28. Ndinogara kumusha kuMarondera ndinoita zvekurima saka ndinoda munhu anoda zvekurima. Nhamba dzangu 0775 572 988.
Ndiri mukomana ane makore 24 ndinotsvagawo musikana ane makore 18-23 anoda zvemba, kuroorwa nekuchata. Ndibatei pa0733 448 671.
Ndakambonyorera kuchirongwa chino asi handina kuwana wandaida, ndinotsvagawo murume anoda kuroora anoshanda kwete zvekutamba. Ndine mwana 1, nhamba dzangu 0783 936 530.
Ndiri mudzimai ane makore 32 nevana 4 ndinodawo murume wekuwanana naye ari pachokwadi ane makore 40 – 42 ane vana vakewo. Ari HIV negative ngaandibate pa0776 907 948 asi macall me back nekubhipa kwete.
Makadii veKwayedza? Ndiri musikana ane makore 39 ndinotsvagawo murume anoda kuroora chero ane vana vake ane makore 39 – 50. Vanoda ngavafone panhamba idzi 0775 515 535 chero nguva zvakawanda tozotaura.
Ndiri murume ane makore 47 ndinotsvaga shamwarikadzi iri pakati pemakore 46 kusvika 60. Vanoda ngavandibate paWhatsApp pa0772 881 779.
Ndiri mudzimai ane makore 19 nemwana mumwe ndiri kuda imba nemurume anoshanda muHurumende ane makore 23-28. Ngaandibate pa0733 855 852 asi macall me back nekubhipa kwete.
Makadii veKwayedza. Ndiri musikana ane makore 20 ndinotsvagawo mukomana. Vandifarira ndibatei pa0734 619 205.
Ndiri mukomana ane makore 27 ndinogara muHarare uye ndiri kutsvagawo shamwarisikana yekuti tironge zvekuzoroorana ine makore18 kusvika 20. Asiri wemuHarare anonamata Johane Masowe ngaandibate panhamba dzangu 0775 456 893.
Makadii veKwayedza? Mufaro wangu kupinda muchirongwa, ndiri mukomana ane makore 26 ndinoda musikana ane makore 18-24 anoda kuroorwa. Vanoda zvekutamba kwete, ndiri mupurisa ndinoshandira kwaMutare. Vanoda fonai kana kundibata paWhatsApp pa0779 702 726.
Ndiri murume ane makore 42 okuberekwa ndinoda mukadzi weChiShangani ane makore 20 kusvika 30 ari HIV negative. Anoda ngaandibate pa0777 627 555 tikurukure.
Makadiiko? Ndiri musikana ane makore 18 ekuberekwa ndiri kutsvagawo mukomana ari pachokwadi uye anonamata, asingapute fodya kana kunwa doro. Anofarira hama dzangu ngaandibate pa0783 255 562.
Ndiri mukomana wemakore 30 ndiri kutsvagawo musikana wekushamwaridzana naye ane makore 18-26 ane mazirudo kana ane mwana mumwe chete. Ndinonzi Patrick, ndibatei pa0738 641 126.
Ndiri murume ane makore 39 ndinotsvaga mudzimai ane vana vake kana asina, anoda kuvaka musha. Ngaandibate pa0717 473 085.
Ndiri mukomana ane makore 21 ekuberekwa ndiri kutsvaga musikana ane makore 20 kusvika 18 ari HIV negative. Ari pachokwadi seni nhamba ngaandibate pa0779 912 718 kana paWhatsApp.
Ndiri mudzimai ane makore 32 ndinodawo murume wekuwanana naye ari pachokwadi ane makore 40 – 42. Ndibatei pa0776 907 948. *******
Makaita basa ndakamuwana wandaida paTishamwaridzane saka vamwe vose chiregai kufona pa0717 261 370.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 39 handina mwana uye ndinotsvagawo murume ane makore 39 kusvika 49 anonzwisisa kuti ini handina mwana, asina chirwere. Nhare dzangu 0774 756 247.
Ndinotenda kune vekwayedza ndakazomuwana wandaida vanofona chiregayi zvenyu
Ndinotsvakawo murume ane makore 40, ndiri mukadzi ane makore 35, ndiri HIV negative uye ndine vana 3. Vanoda fonai pa0774 576 019 tichengetane.
Makadii henyu veKwayedza? Ndiri murume ane makore 33 ndinotsvagawo mukadzi wokuroora ari pachokwadi. Nhamba dzangu +27 719 514 798, ndatenda.
Ndiri mudzimai ane makore 45 ndinotsvakawo shamwari yakavimbÃ­ka ine makore 50 zvichikwira handidi anonetsa uye vana vadiki musafone
Makadini veKwayedza? Ini ndiri musikana ane makore 19 nemwana 1 ndinodawo murume ane makore 22-25 akavimbika, anotya Mwari. Ane rudo ari HIV negative anondidawo anondibata paWhatsApp pa0783 368 045.
Makadii? Ndiri murume ane makore 46, HIV positive uye ndine vanasikana vaviri. Ndinotsvagawo mukadzi wekuroora ari HIV positive ane makore 37 zvichidzika. Ndinoda anonamata anoda kugara nevana vangu sevake chero ane vana vaviri zvichidzika. Ndiri mupositori anoda ndibate pa0716 494 229.